လျှို့ဝှက်​ဂဇက်​ရွာမှ ~~​မျှော်​စင်​ကျွန်းဆီသို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လျှို့ဝှက်​ဂဇက်​ရွာမှ ~~​မျှော်​စင်​ကျွန်းဆီသို့
Posted by မောင်ရိုး on Jul 17, 2013 in Creative Writing | 40 comments
လျှို့ ဝှက်​ဂဇက်​ရွာ ~~~
ဟုတ်​ပါတယ်​ ..တစ်​ခါက မျက်​နှာဖုံးကိုယ်​စီနဲ့ လျှို့လျှို့ ဝှက်​ဝှက်​ ​နေခဲ့ကြဖူးပါတယ်​ …..
ဂဇက်​ရွာ စည်​ကားဖွံဖြိုးလာချိန်​မှာ စစ်​အုပ်​ချုပ်​​ရေးကာလ ဆို​တော့ အစာလည်းစား ​ဘေးလည်းကြည့်​​ပေါ့​လေ ….
သူသူကိုယ်​ကိုယ်​ ဘဝမှန်​မပြရဲ မ​ပြောရဲခဲကြတာပဲမဟုတ်​လား … ဂဇက်​ရွာဆိုတာကလည်း သိ​တော်​မူတဲ့အတိုင်း … မကြာခဏဆိုသလို နိုင်​ငံ​ရေး
စီးပွား​ရေး ၊ဘာသာ​ရေးနဲ့ ဟိုအ​ရေး ဒီအ​ရေး​တွေ ​ဆွေး​နွေးငြင်းခုံ​နေကျဆို​တော့
နိုင်​ငံ​တော်​ လူကြီးမင်းများ မျက်​​စေ့​နောက်​မှာစိုးရ​သေးသကိုးးးး
ပထမဆုံးထင်​ပါရဲ့ .. ကိုရင်​ရှုံးတို့ ဦးဖက်​တီးတို့ MOONPOEM တို့ ​တွေ့ဆုံကြဖို့ စီစဉ်​​ပေမယ့်​
မ​အောင်​မြင်​ဘူးလို့​တော့ ကြားဖူးခဲ့ပါတယ်​ ။
အဲဒီ​နောက်​မှာ​တော့ … ကြိုကြားကြိုကြားရွာသူား တစ်​စုတစ်​ဖွဲ့ အနည်း​ငယ်​​လောက်​ဆုံဖြစ်​ကြ​ပေမယ့်​ လူများများ​တော့ စုမိခဲ့ဟန်​မရှိပါဘူး ။
ကျ​နော်​သိသ​လောက်​ ရွာထဲကိုယ့်​ဓတ်​ပုံစတင်​တာဟာ ကိုရင်​နိဂိမိဘဲ ဖြစ်​မယ်​ထင်​တယ်​ ။ ၂၀၁၁ ​လောက်​မှာ ရွာသူားတစ်​ချို့နဲ့ အဘ​ဖော တို့ ဆုံ​တွေ့ခဲ့ကြပါပြီ ။ တစ်​ချို့တ​လေ ဆုံဖူးကြပြီဖြစ်​လို့ အတန်​ငယ်​ပွင့်​လင်းလာမယ်​ထင်​ပါရဲ့ ။
ဒါ​ပေမယ့်​ … တစ်​ကယ်​တန်း လူစုလူ​ဝေးနဲ့ စတင်​ဆုံမိခဲ့တာက​တော့….
2012 နှစ်​ဆန်းပိုင်းမှာ လုပ်​ခဲ့ကြတဲ့
နာ​ရေးကူညီမှုအသင်းကို အလှူ​ငွေ​ပေးအပ်​ခဲ့တဲ့ပွဲပါဘဲ ။
​ကိုရင်​​ရွှေတိုက်​ AKKO နဲ့ E TONE (အိတုန်​) တို့ဦး​ဆောင်​ခဲ့တဲ့ အလှူပွဲ​လေးဟာဆိုရင်​ မျက်​နှာဖူံး​တွေစတင်​ခွာချပြီး
ပွင့်​လင်းမြင်​သာတဲ့ ဆက်​ဆံ​ရေး စတင်​လာဖို့ အစပထမလို့ ဆိုနိုင်​ပါတယ်​ ။
အဲဒီပွဲမှာ ရွာသူရွာသားတစ်​ချို့ကို ရွာသူား​တွေမြင်​ခွင့်​ရလိုက်​တယ်​ဆိုပါ​တော့ …..
အဲဒီပွဲဖြစ်​​မြောက်​ခဲ့တဲ့အတွက်​ ရွာထဲမှာ မန်​ဘာဦး​ရေလည်းတိုးလာသလို စာ​ရေးစာဖတ်​ ကွန်​မန့်​​ရေးတာ​တွေလည်း ပိုပြီးစည်​ကားလာပြန်​တာ​ပေါ့ ​လေ ။ မှတ်​မှတ်​မိမိ အီးဇီးကွတ်​အဖွဲ့ကရွာသူမအိဆိုရင်​ အဲဒီပွဲ​ကြောင့်​ ရွာသူဖြစ်​လာတာပါပဲ ။။ရှိပါ​သေးတယ်​ ​ရွှေပုံ့ နဲ့ အခြား သူအများအပြား​ပေါ့​ ။
အဲဒီပွဲပြီးလို့ လအနည်းငယ်​မှာဘဲ အမှတ်​တရဆုံစည်းမှု ဒုတိယအကြိမ်​ဖြစ်​​မြောက်​ဖို့ ဖန်​တီးလာပြန်​​တော့တယ်​ ….
ရွာထဲမှာမ​ကြေငြာခင်​ကတည်းက မအိတုန်​ အီး​မေးပို့လို့ ​သိခဲ့ပြီးပါပြီ ။
အစုကြီး​ကျေးရွာကသီတဂူ မျက်​စိကု​ဆေးရုံကြီးကို သွား​ရောက်​လှူတန်းကြဖို့ပါ။
ပန်းတ​နော်​ အပိုင်​ထဲမို့ ​နေ့ချင်းပြန်​ သွားဖို့ စီစဉ်​ကြပြန်​ပါပြီ ။ ထူးထူးခြားခြား
ရွာရဲ့မင်းသား အင်​ဇာဂီ ပြန်​လာမယ်​ တဲ့ ….
မန်း​လေးက ကို​ပေါက်​နဲ့ မဒမ်​​ပေါက်​တို့ လာကြမယ်​ တဲ့ …. ရွာရဲ့အချစ်​​တော်​ ဖရဲမ (ဖရဲသီး) လည်း မန်း​လေးကလာမယ်​ဆိုပဲ … ချစ်​ရင်​ထူးတို့ညီအစ်​ကိုလည်းပါမယ်​​ပေါ့…
ဒါတင်​ဘယ်​ကမလဲ ​နေပြည်​​တော်​တပိုင်​စား ရွာစား​ကျော်​တို့မိသားစုလည်း လာကြမယ်​ လို့သိရပြန်​ပါတယ်​ ။ ပွဲက​တော်​​တော်​​လေး စည်​ကား​နေပါပြီ ။
အဲဒီပွဲဟာ ခရီးတို​လေးတစ်​ခုအသွင်​သွား​ရောက်​ခဲ့ရသလို ရွာသူားများအထူးရင်းနှီး​စေတဲ့ပွဲတစ်​ခုပါဘဲ ။ စီစဉ်​သူများက​တော့ အန်​တီမမ၊ဦး​နေးချား၊ အစ်​မပဒုမ္မာ နဲ့ ဆူး တို့ပါ ။
ယ​နေ့ ..ရွာထဲကလူငယ်​​တွေစုစည်းပြီးတည်​​ထောင်​ထားတဲ့ ဒါဇင်​ပလပ်​ အဖွဲ့ဟာဆိုရင်​လည်း ဒီလိုအလှူပွဲ​တွေမှာ
ဆုံစည်းခဲ့ကြသူ​တွေ​ပေါင်းစည်းခဲ့တဲ့ အဖွဲ့လို့ဆိုရင်​ မမှားဘူးထင်​ပါတယ်​ ။
အလှူပွဲ​တွေက​တော့ ဆက်​တိုက်​ပါပဲ ။ ၅ လပိုင်း ပန်း​တ​နော်​အစုကြီးအလှူအပြီးမှာ ရခိုင်​အ​ရေးစတင်​​ပေါ်​ပေါက်​လာပြန်​​တော့တယ်​ …။ ရခိုင်​ပြည်​နယ်​က ညီ​နောင်​သားချင်း​တွေရဲ့ လိုအပ်​ချက်​​တွေကို ဖြည့်​စည်း​ပေးချင်​တဲ့ ဆန္ဒကိုစတင်​သူက ….
ကိုထူးဆန်းပါ …. ။ ဟုတ်​ပါတယ်​ သူကစပြီး ကိုဘလက်​တို့အပါအဝင်​ ရွာလူကြီးများလူငယ်​များ​ပေါင်းစည်းလို့ ​စီစဉ်​ကြတာမှာ
ရခိုင်​​ဒေသ တွင်​မကဘဲ ကိုထွန်းဝင်းလတ်​နဲ့ချိတ်​ဆက်​ပြီး ​မော်​လူး​ဒေသက ရဲ့ လိုအပ်​ရာရာပညာ​ရေးအလှူကိုပါ လှူနိုင်​ခဲ့ပြန်​ပါ​တော့တယ်​ ။
ဒီလိုအလှူအတန်း​တွေမှာ မန်း​လေး​ဒေသအတွက်​ ကို​ပေါက်​ ၊ ​နေပြည်​​တော်​ဝန်းကျင်​အတွက်​ ရွာစား​ကျော်​ တို့က အလှူ​ငွေ​ကောက်​ခံ​ပေးပြီး ရန်ုကုန်​ဝန်းကျင်​ကို​တော့ အီးတီ ၊ Mလုလင်​ အမတ်​မင်း ​ရွှေတိုက်​စိုး မအ်ိတုန်​ တို့ကတာဝန်​ယူ​ကောက်​ခံ​ပေးတာ​ပေါ့ ။
စတုတ္ထအကြိမ်​ တွံ​တေး ဘုန်း​တော်​ကြီးပညာ​ရေး​ကျောင်းအလှူမှာ​တော့ ဒါဇင်​ပလပ်​ လူငယ်​​တွေဦး​ဆောင်​ခဲ့ပါတယ်​ ။
လူငယ်​​တွေရဲ့ ထက်​မြက်​တဲ့ စွမ်း​ဆောင်​မှု​ကြောင့်​ လစဉ်​လတိုင်းလှူနိုင်​ခဲ့တာ အ​တော်​ကြာပါပြီ ။ ရွာသူား​တွေအချင်းချင်းလည်း ​တွေ့ဆုံရင်းနှီးခွင့်​ရခဲ့ပါတယ်​ ….။
ကဲ ….. ​မောင်​ဆာမိ​ရော ဘယ်​ပွဲ​တွေမှာ ကိုယ်​တိုင်​ပါဝင်​ခဲ့ပါသလဲ ..။
ဟုတ်​ကဲ့ …. ကျ​နော်​ တစ်​ပွဲမှမလိုက်​ပါနိုင်​ခဲ့ပါဘူး ….။
အ​ကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ လိုက်​ပါခွင့်​မရခဲ့ပါဘူး … ဖန်​သားပြင်​မှာ​တွေ့ရတဲ့ ဓာတ်​ပုံ​တွေသာကြည့်​ပြီး ကြည်​နူးခဲ့ရတာ​ပေါ့ ။
ကျ​နော်​ တစ်​ကယ်​တမ်း ရွာသူား​တွေနဲ့ဆုံတဲ့ပွဲက ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်​နဝါရီက လုပ်​တဲ့ပွဲမှပါ …. ဒါ​ပေမယ့်​ …
အဲဒီပွဲမတိုင်​မှီ ရွာသူသား (၃)ဦးနဲ့​တော့ ဆုံခဲ့ဖူးပါတယ်​ ….. ပထမဆုံး စတင်​ဆုံမိခဲ့သူက မအိတုန်​ ..။
နာ​ရေးကူညီမှုအသင်းကို အလှူ​ငွေ​ထည့်​ဝင်​ဖို့ သွား​ရောက်​​ပေးရင်းနဲ့ပါ ။ ကျ​နော့်​ကို သူ့ထက်​ငယ်​တဲ့ လူငယ်​​လေးတစ်​​ယောက်​လို့ထင်​ထားတဲ့ မအိတုန်​ နဲ့ ….
E tone ဆိုတာ ကျ​နော့်​ထက်​များကြီး​လေမလားလို့ မှန်းမိတဲ့ကျ​နော်​ ….. တကယ်​ဆုံ​တွေ့​တော့ အံသြခဲ့ရပါတယ်​ ။ တကယ်​​တော့ သူ့ရဲ့ ​ဝေဖန်​ပိုင်းခြားနိုင်​စွမ်းနဲ့ အ​တွေးအ​ခေါ်ရင့်​ကျက်​မှုကို ကျ​နော်​အတွက်​မှားခဲ့တာပါ ။ ပြီး​တော့ …ကျ​နော့ရဲ့ ကုမရတဲ့ ​ရောဂါ​ကလည်း မြင်​မြင်​သမျှကိုယ့်​ထက်​ကြီးတယ်​လိုိ့ထင်​မိတာကိုးးးး
​နောက်​တစ်​​ယောက်​က ဆူးးးး …။ အင်းး အမှန်​အတိုင်းဝန်​ခံရရင်​ ဆူး ကိုလည်း ကိုယ့်​ထက်​ကြီးတယ်​လို့ ထင်​မိတာပဲ …။ အစုကြီးအလှူအတွက်​ အလှူ​ငွေသွား​ပေးရင်း ပထမဆုံး​ကောင်​တာမှာ​တွေ့လိုက်​ရတဲ့သူကို ဆူးးး လို့ထင်​မိတာ ။
ကျ​နော်​ထင်​ပါတယ်​ … အဲဒါ ဆူးရဲ့ အ​မေဖြစ်​မှာပါ ။ “ကျမ ဆူးပါ” လို့​ပြောသံကြားမှ စိတ်​ထဲက အားနာလိုက်​တာ ……။ ကျ​နော့်​​ရောဂါက အဲဒီလို​လေ ….
အဲ …. ​နောက်​တစ်​​ယောက်​က …
ဦး​ကျောက်​ခဲ …။ ပထမဆုံးအကြိမ်​ဆုံခဲ့တာက အလုံကလတ်​ကီးဆဲဗင်း လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​မှာပါ ။ ဒီတစ်​ခါလည်း ကျ​နော်​ ​ရောဂါ ​ဖောက်​ပြန်​တာဘဲ ။ ဦး​ကျောက်​ခဲဆို​တော့ ကျ​နော့်​ထက်​အများကြီး ကြီးမယ်​ထင်​တာ​ပေါ့ ..။
တကယ်​လည်း​တွေ့​ရော .. ရုပ်​က ကျ​နော့်​ထက်​နုပြီး အသက်​က ကျ​နော့်​ထက်​နဲနဲဘဲကြီးတာ​လေ ။
တစ်​​ခေတ်​တည်း လူဖြစ်​လာကြတာ​ပေါ့ ။ ဒီတစ်​ခါလည်း ကျ​နော်​ မှားပြန်​တာပဲ ……
ဒီလို ဒီလိုနဲ့ ……
ပထမအကြိမ်​ ​မျှော်​စင်​ကျွန်းမှာ ဆု​ပေးပွဲနဲ့ ​တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပနိုင်​ခဲ့တယ်​ ။
ကျ​နော်​အဲဒီပွဲမှာ ရွာသူား​တွေနဲ့ စ​တွေ့ဖူးတာပါဘဲ ။ အချိန်​နဲ့ ​နေရာအ​ခြေအ​နေ​ကြောင့်​ တစ်​ချို့လူ​တွေကို နှုတ်​ဆက်​ရုံနဲ့ဘဲ မချင့်​မရဲဖြစ်​ခဲ့ရတယ်​ ။
​ပြောစရာစကား​တွေ ရင်​မှာ အပြည့်​နဲ့ လက်​ပြရုံနဲ့​ကျေနပ်​ခဲ့ရပြန်​ပါတယ်​ ။
အခု …. ဒုတိယအကြိမ်​ ​တွေ့ဆုံပွဲကြီးနီးလာပါပြီ …။
ကျ​နော်​ နဲ့ရင်းနှီးပြီးမ​တွေ့ဖူး​သေးတဲ့ သူ​တွေနဲ့​တွေ့ရပါ​တော့မယ်​ ။
ခင်​မင်​ရတဲ့ ရွာသူား​တွေနဲ့ ဆုံဖို့အ​ရေး စိတ်​လှုပ်​ရှားစွာနဲ့ ​တစ်​ရက်​ပြီးတစ်​ရက်​
လက်​ချိုး​ရေ​နေမိပြန်​ပြီ ။ ဖြစ်​နိုင်​ရင်​ အားလုံးနဲ့ ဆုံချင်​တာပါပဲ ……
မျက်​နှာဖူံး​တွေခွာချပြီး ပကတိအပြုံး​တွေနဲ့ ​ပျော်​​ပျော်​ပါးပါး ​တွေ့ကြဖို့ …..
ကျ​နော်​တို့ လျှို့ဝှက်​ ဂဇက်​ရွာက ​မျှော်​စင်​ကျွန်းကို လာခဲ့ပါမယ်​ …..
21 ရက်​ ဇူလိုင်​လ ၂၀၁၃ မှာ ​မျှော်​စင်​ကျွန်းမှာ ဆုံကြမယ်​ …..။
ပထမဆုံး ဥဥဆာ ကို ဈေးဦး ဖောက်ခဲ့ဦးမယ်။
ဒီ ဒုတိယအကြိမ် ကွန်ဖရင့်မှာ
ကျုပ်လည်း မျက်နှာ စပြရင် ကောင်းမလားလို့ တွေးနေပါတယ်။
ဒီလို တွေးရင်း တွေးရင်းနဲ့ စာရင်း ပေးမယ့် ရက်တောင် လွန်လာခဲ့ပြီ။
လာလို့ ရတော့ဘူးနဲ့ တူပါတယ်။ စာရင်းလည်း ပိတ်ပြီ ထင်ပါတယ်။
အကယ်၍များ အဲ့ဒီရက်မှာ …
ခေါင်းဖြူဖြူနဲ့ အဘိုးကြီး တစ်ယောက်များ မယောင်မလည်နဲ့ ရောက်လာရင်
အဲ့ဒါ “မဟာရာဇာ အံစာတုံး” ဆိုတဲ့ ဒီရွာထဲက လူလို့ပဲ မှတ်ကြပါ ခင်ဗျာ။
အခန့်​မသင့်​ရင်​ ​လောင်းကစားဆိုင်​ရာဆက်​စပ်​ပစ္စည်းအဖြစ်​ အဖမ်းခံရနိုင်​တယ်​
Myanmar soldiers take position in downtown Yangon, Myanmar, Thursday, Sept. 27, 2007. About 10,000 anti-government protesters gathered in the city Thursday despiteaviolent crackdown by security forces that drew international appeals for restraint by Myanmar’s ruling junta.
PHOTOS: Myanmar Cyclone Destroys Pagodas, Temples
—Photograph by Mandalay Gazette/Reuters
ကြား​တော့ ကြာဖူးပါရဲ့ ဒီလို​လေးသိရ​တော့ ပို​ကောင်းတာ​ပေါ့
ကို​ပေါက်​ရဲ့ ဓာတ်​ပုံတစ်​ချို့လည်း ပါခဲ့ဖူးမယ်​ထင်​တယ်​
​တော်​ကြာ ဦး​ကြောင်​လို ချက်​ကြီးရွာနဲ့ မှား​ မ​နေ​တော့ဘူး​ပေါ့ 
ဦးဆာ ထက် ကြီးတယ် ထင် လား ဟင်
ကျွန်တော် ထင်ထားတာက ဦးဆာက ကျွန်တော့်ထက် အများကြီး ကြီးမယ် ထင်ထားတာ
အခု သိပ်မှ မကွာပဲကိုးးး
ပြီးတော့ ရုပ်ဆို ရင် ဦးဆာက တောင် ကျွန်တော့်ထက် ပို နုနေသေးတယ်
ကဲ ဆုရတဲ့သူကြီးးး မုန့်ဝယ်ကျွေးဖို့ပြင်
မှတ်မှတ်ရရ ရွာသူရွာသား ရေးဖော်များကို ပထမဦးဆုံး ဆုံမိတာ ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာ ၂၅ပါ…
ကိုရင်ဆာနဲ့က နောက်တစ်ရက် ၂၆ရက်နေ့လေ…
ကျောက်စ်လည်းလွဲတာပဲ၊ တကယ်တွေ့လိုက်ရတော့ ဂျလေဘီသည်ကြီးက ဖြူဖြူချောချောလေ…
လပ်ကီးဆဲဗင်းမှာ လ္ဘက်ရည် ကျဆိမ့် ၂ခွက်စီနဲ့ စီးကရက်တစ်ဗူးကုန်အောင် ပွါးခဲ့ကြတာ…
အမှတ်တမဲ့တော့မဟုတ်… အမှတ်တရပါပဲဗျို့… လွမ်းတယ်ဗျ
ဒီတစ်​​ခေါက်​​တွေ့ဆုံပွဲလည်း အရင်​လူ​တွေနဲ့ဘဲ ဆုံပြီးသွားဖြစ်​မှာပါ ။
ဦး​ကျောက်​ မပါနိုင်​တာကို​တော့ လွမ်းမိသားဗျာ
ဘူ​ဖေးကို ဓာတ်​ပုံရိုက်​ပြီး တင်​​ပေးလိုက်​မယ်​ ။
ဖတ်နေရင်း ဓာတ်ပုံများ ပါမလားထင်လိုက်သေးးးးး
မျက်မှန်လေးနဲ့ တူမယ်မှတ်တာပဲ။ :mrgree:
ညစာ ၂ ဝိုင်းးးးးးးးးးးးး
တခါတုန်းကပေ့ါ……. (ခွက်ဒစ်တူ ကိုဆာမိ) လို့
ပြောရမယ့် မမေ့ရက်နိုင်စရာ လွမ်းမောဖွယ်အတိတ် (ဆြာစိုးစာထဲကလို လိုကျား ) တစ်ခုအဖြစ်တော့ ကျန်ရစ်ပါလိမ့်မယ်။
၆ လဆိုတာ တစ်​ချို့က ခဏ​လေးထင်​ကြပါတယ်​
သဂျီး ဟီုဘက်​မှာ​ပြောသလို အသက်​၆၅ ဆိုရင်​​တော့ ….
တစ်​ခါတုန်းက ဂဇက်​ရွာ​ပေါ့ဗျာ ….
ခင်​ဗျားကြီးနဲ့ က​အောင်​ပုကိုလည်း ကျုပ်​က
ကျုပ် လဗျွတ်ကြီး မတွေ့သေးလို့.. တွေ့များတွေ့ရင် ဘိုပြောမဲ သိဝူး
ကျုပ်နေတဲ့ မြို့ နာမည် ယူသုံးးတဲ့
ရွာမို့ ကျုပ်မြို့မှာ တွေ့ဆုံပွဲ လုပ်မှတတ်မယ်
မန်း မှာ မန်​ဘာအင်​အား​ကောင်းပါတယ်​
ကျုပ်​က ခင်​ဗျားကို ​ကျောင်းဆရာမလို့ထင်​​နေတာ ဗျ
ခုလည်း ဆရာမပါပဲ ​နော
သာမီးကိုရော မမဂျီးလို့ ထင်မိလားဟင်င်.. အူးလေး..
ပိုစ့်တွေရေးရင် ကွန်မန့်တွေပေးရင်းနဲ့တော့ ရွာသူားတစ်ချို့ကို ခင်မိပါတယ်၊ အဲဒီထဲမှာ ကိုဆာမိတစ်ယောက် လည်းအပါအ၀င်ပါ။ ရွာသူသားတစ်ချို့နဲ့တော့ ကျွန်တော်ဆုံတွေ့ဖူးပါတယ် ဆုံတွေမှုရှိတိုင်းလည်း ခင်ခင်မင်မင် ပြောကြဆိုကြတာမို့ အတော်ကိုအားရစရာကောင်းတဲ့ ဂဇက်ပါဘဲဗျာ။
၂၁ ရက်နေ့မှာ တိုက်ဆိုင်စွာ ရန်ကုန်မှာရှိလို့ ပွဲကိုတော့ မအားတဲ့အကြောင်းလေးရှိနေလို့ အစီအစဉ် အစအဆုံး မတက်နိုင်ပေမယ့် ငါတို့ ဂဇက်က သူတွေတွေ့ဆုံခဲ့ရာနေရာနဲ့ အခင်းအကျင်းလေးကို ကိုယ်တိုင်မြင်ဖူး ချင်လို့တော့ ခဏ တာလေး ရောက်ရင်ဖြင့်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တော့ လာမလို့စိတ်ကူး ထားမိပါတယ်၊ အဲဒီအချိန်လေးများ ကိုဆာမိ တစ်ယောက်ကို လက်ဆွဲနုတ်ဆက်ခွင့်ရရင်ဖြင့်ပေါ့လေ။
ဘယ့်​နှယ်​​ပြောပါလိမ့်​ … ကျ​နော်​လည်း ဆုံချင်​မတာလားဗျာ
​စောင့်​​နေမယ်​​နော .. လာဖြစ်​​အောင်​သာလာခဲ့ပါ
တစ်​ကယ်​​တော့လည်း …. ​အေး​အေး​ဆေး​ဆေး​ပြောချင်​ပါ​သေးတယ်​ဗျာ ….
အင်းးးးး တွဲပြီးလာရင်​​တော့ ပို​ကောင်းတာ​ပေါ့
ဇင်ဇင့် လို ကောင်မချောချောလေး အဖော်ပြုပြီးတော့ တော့ ..ရွာ့ ကွန်ဂရက်စ် ကို တက်ဖူးချင်သားဗျာ..
ပထမဦးဆုံး အလှူပွဲလေးကို အကြောင်းပြုလို့
ကျေးဇူးလဲတင် ၀မ်းလဲသာပါတယ် ကိုဆာမိရေ…
ကဘုန်းကျော်ရဲ့ စာတစ်ပုဒ်ကြောင့်လဲ စိတ်တိုခဲ့ရတာ မှတ်မိသွားပြန်ရော….
ရွာအလှူတွေမှာ ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့တာ ပထမ ကနေစလို့ ခုချိန်ထိပါဘဲ…
နောက်ထပ်လှူမယ့် အလှူတွေမှာလဲ ဆက်လက် ပါဝင်နေပါဦးမယ်…
ရွာ မှာလည်း ​မေ့မရနိုင်​တာ​တွေအများသား ဗျ ။
တ​နေ့ကျရင်​​တော့ ပြန်​​ပြောစရာ​တွေအများကြီးရတာ​ပေါ့ဗျာ ။
ပျို့ကညာငြိ ဆို​တော့ …
ငိုချင်လာ၏။ ဘာရယ်မဟုတ် ကျုပ်စိတ်လည်းခပ်လှုပ်လှုပ်ပါ ကိုရင်ဆာ…
ဦးဆာမိ ဆိုတော့ အသားမဲမဲ ထင်မိတာဗျို့ …
တကယ်တွေ့တော့မှပဲ လွဲ ပါ ရောလားးး…
မဂျူးကတော့ ဦးဆာ ထက်ငယ်မယ်ထင်တယ် …
ဒီတစ်​ခါ မဂျူး စရင်း​ပေးထားတာမ​တွေ့ပါလား
ဖြစ်​နိုင်​ရင်​​ပေါ့​လေ ….. အားလူံးလာ​စေချင်​တာပါပဲ
အစားအစာလေးက ပိုတောင်ထူးခြားလာတယ်ဆိုတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့
တိုက်မယ့်သူတွေများရှိရင် ကျွန်တော်က သောက်တတ်တယ်လို့……….
နတ်ဝတ်တန်ဆာတွေ ဝတ်မလာပါဘူး လို့
ပုံမှန်ပဲ လာကြိုရင် ရပါတယ် လို့
သိကြားစစ် မစစ် စစ်ဆေးတာ။
ဒီတစ်ခါလဲ နတ်ဝတ်တန်ဆာတွေ ဖျောက်ခဲ့မယ်
နတ် အချင်းချင်းသာ မြင်နိုင်မှာဗျိုးးးးးးးးးးးးးးးးးး
မန်းက လူက ပထမဆုံး ဆုံတဲ့ မန်ဘာတွေက
အဲ့နေ့ကလို နောက်တစ်ခါ ထပ် ပေါကြဦးစို့လား ဦးဆာရေ့
ကိုယ်မပိုင်တဲ့ကိုယ့်ဘွမို့ တွေ့ဆုံပွဲတိုင်းလွဲချော်ခဲ့ရတာရင်နာမိပါတယ်။ ဒီတခါလဲ ချိန်းမထားပဲ တည့်တည့်ကြီး တိုးလို့ အလွဲကြီးလွဲရပြန်ပီ။
ကိုယ်​ချင်းစာမိပါရဲ့ဗျာ ။ကျုပ်​လည်း အရင်​အလှူ​တွေတုန်းက ဒီလိုပါပဲ
ခုလည်း … မနဲကြိုးစားရမှာပါ
အတိတ် ပြန်လွမ်းဆွတ်တာလေး ကောင်းလိုက်တာ။
ရွာ့စာအုပ်မှာ အလှူမှတ်တမ်းအမှာစာကို ကဆာမိရေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်။
ကျ​နော်​က ဒီလိုပဲ အတိတ်​ကိုသွား​နေကျဖြစ်​​နေလို့ထင်​တယ်​
ဒါ​ကြောင့်​ ​ရှေ့ကိုမ​ရောက်​​တော့ဘူး …
ကွန်​ဖရင့်​ အ​ကြောင်း​တော့ သိမသိတာတ​ကြောင်း ပြီး​တော့ …
မူပို​င်​ရှင်​ အစ်​မ​တော်​နဲ့သာ ပိုပြီးသင့်​​တော်​တာ မို့
​နောက်​တစ်​ခုက ဓာတ်​ပုံလည်း မတင်​တတ်​ ၊စာ​ရေးရတာကလည်း ဖုန်း နဲ့ဖြစ်​​နေ အဲသလို​တွေ​ကြောင့်​
ဒါ​ပေမယ့်​ ….. အင်းးးး ဆို​တော့ …..
နည်းနည်း​တော့ ဟို​ရေးဒီ​ရေး လုပ်​ဖြစ်​မလားပဲ ။
ဘာပဲဖြစ်​ဖြစ်​ အစ်​မ​ရေးတာ​​လေး​တော့​မျှော်​​နေဦးမယ်​​နော
ဒီတစ်ခါ ဂဇက်ကွန်ဖရဲင့်စ်အကြောင်း ကိုဆာမိဗားရှင်းလေးရေးပေးရင် ကောင်းမှာပဲ။
အန်တီ ပြောတာ ထောက်ခံပါတယ် ။
ဒီပွဲကတော့ လွဲလို့ကို မဖြစ်တော့ဘူး။
စာအုပ်တွေအပိုဝယ်၊ လက်မှတ်တွေထိုးခိုင်းထားပြီး ONLINE ကနေ လေလံတင်လိုက်ရရင်……
အစ်​ကိုနဲ့ အရင်​ဆုံဖြစ်​မလားပဲ ……
အယ် .. တများ အာမေဋိတ်သံနဲ့ …အသက်ကြီးတယ်တော့လို့ … ပြောမိပြောရာ ပြောခဲ့တာ ဂယ်ပဲ အမှတ်ထားတယ် … ။ ဟီး …ပြန်တွေးတိုင်း ဟန်မဆောင်တတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် … အားနာရပါတယ်ချင့် … ။
ယောက္ခမရီးချင့် ….ဖစ်နိုင်ရင်လေ တောက်ထဲ မလာဗဲ သများတို့ အမောပြေအောင် … သားလေးနဲ့ တကွ တက်ရောက်ပါလို့ဖြည့်စွက် အကြံပုပါရဇီချင့် …. ။ ဒယ်ဒီမိုက်ဆို .. ခဏခဏသားလေးနဲ့ လာတယ် … ။
ပထမဆုံးအလှူမှာ ပထမဆုံး​တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ ရွာသူားအ​နေနဲ့ အမှတ်​ရ​နေမိတာ ။
ဒါနဲ့ … ဟို​ကောင်​က အရမ်း​ဆော့သဗျ ။
အ​မောမ​ပြေဘဲ ပို​မော​နေမှဖြင့်​ …..
ကျနော်က ကတော့ ကြိုတင်စိတ်ကူးရဲ အမြဲလွဲပါသတဲ့။
မှတ်မှတ်ရရ 2011 ကျနော်မွေးနေ့ မတိုင်ခင်တစ်ရက်မှာ မပဒုမ္မာ မမ ကိုနေချား မဝေ ဆူး တို့နဲ့ အမှတ်တရ ဘုရားဖူးထွက်ခဲ့ရ။
နောက်ရက် ကျနော်မွေးနေ့မှာဦးဖက်တီး တေးကလုန် ဒေါက်ဒေါက် အာဂ ရစ်မမ ချာတူး မောင်ဝါ၀ါ အီးရော်စ် မနောဖြူ တို့နဲ့တွေ့ခဲ့ရ
နောက်ပိုင်းမှာတော့ ရွာသူားအတော်များများ နဲ့ရန်ကုန်မှာရေ မန်းလေးမှာပါတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အခုတစ်ပွဲလဲ ခဲထားပေမယ့် လွဲပြန်ပါတယ်။
ကျနော်ရိုက်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံ လေးတွေကို ရွာသူားများအတွက် ပီပီချိုနဲ့ မိမိတိုက်ဆီပို့ပေးထားပါတယ်။
ဓါတ်ပုံလေးကူးခကတော့ တစ်ပုံမှ 65ကျပ်ဘဲကျပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ဒီဓါတ်ပုံလေးများထဲမှာ ကိုပေါက်ရဲချစ်ခင်လေးစားမူ့တွေနဲ့ စေတနာတွေပါဝင်နေတာအမှန်ပါဘဲ။
ဒီ​နေ့မနက်​မှ Reply လုပ်​ဖြစ်​တာခွင့်​လွှတ်​​နော
ဒီတစ်​ပတ်​​တော့ ကို​ပေါက်​လာမယ်​ထင်​ထားတာ လွဲပြန်​တာဘဲ​နော
ကိုစားလှယ်​ဦးမာဃ​တော့ မ​နေ့က​ရောက်​လာပါပြ ။
ကျ​နော်​ရတဲ့ ဓာတ်​ပုံ​လည်း ဘာပုံဆိုတာ ပြန်​​ပြောဦးမယ်​ ။
အခု ကျ​နော်​ စုရပ်​ကိုသွား​နေပါပြီ